DEG DEG: CabdiKariin Qubaaye uu dib ugu soo laabtay .... » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Africa/DEG DEG: CabdiKariin Qubaaye uu dib ugu soo laabtay ….
DEG DEG: CabdiKariin Qubaaye uu dib ugu soo laabtay ….
Ramzi Yare November 11, 2017
Xiddiga khadka dhexe ee qaranka Soomaaliya Qubaaye Yare Cabdala ayaa dib ugu laabtay kooxda Dekkeda oo uu ka tirsanan jiray.
Laacibkan ayaa heshiis la galay kooxda Heegan marku iskaga dhaqaaqay Dakkeda Isagoo xitaa Ciyaaro saaxiibtinmo oo kooxda ay ciyaartay uu kasoo muuqday balse ugu danbeyn xidigan ayaa dib ugu soo laabtay kooxdisii hore.
Qubaaye ayaa ka mid ah xidigaha qaranka Soomaaliya ee Tababarka ku samenaya Gudaha caasimada muqdisho Shalay ayaana lagu soo bandhigay xarunta kooxda Dekkeda.
‘Aad ayaan ugu Faraxsanahay in aan dib ugu soo laabtay kooxdeydii oo aan lasoo qatay waqti aan iloowi Karin xiligan ayuu Yiri Qubaaye yare Cabdla .
Sido kale Gudaamiyaha kooxda Dekkeda Mr Kuwaataro ayaa sheegay in la xaliyay qilaafkii sababay in laacibkan uu iskaga tago kooxda isag xusay in kooxda ay soo ceshan doonto xidig walba oo muhiim ah kooxda ka maqan .
Dekkeda ayaa sanadkii tagay ku guuleysatay tartanka horyaalka somaliya Balse kooxda ayaa xiliga kadib Weyday Ilaa Saddex xidig oo kooxda muhiim ka ahaa Kuwaas oo kala ah Ahmed Hassan Macaani,Cabdi Casiis Catoosh iyo Qubaaye oo hada kooxda kusoo labtay .
Ma ahan markii ugu horeysay oo uu xidig heerkan oo kale ah uu koox heshiis la galo kadibna oo heshiiska kaga baxo hore sidan oo kale waxa sameyay Daa Uud Tubaale Xasaasi Iyo Meyma oo kooxo heshiisyo la galay hadana koox kale ku biira
Ronaldo ayaa wax badan i baray.” Paulinho
Xiddigo Caan Ah Kubadda Cagta Kuwaas Oo Isku Koox Soo Mareen Balse Aad La Yaabidoonto Markaad Ogaatid